द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | फरवरी 14, 2022 | लिखित र मौखिक संचार कौशल
तलब वृद्धि अनुरोध: तपाईंको टोलीको लागि
विषय : पारिश्रमिक २०२२ मा बिहान टोली
श्रीमती एक्स, श्री वाई,
हामीले भर्खर xxxxxx मा मेरो वार्षिक मर्मत गरेका थियौं। हाम्रो आदानप्रदानको क्रममा, हामीले मेरा सहयोगीहरू र मेरो लागि सम्भावित वृद्धिबारे छलफल गर्यौं।
मैले मेरो टोलीसँग पूरा गर्न व्यवस्थित गरेको कार्यहरूको विशिष्ट उदाहरणहरू दिएर मेरो अनुरोधलाई सुदृढ पार्न चाहन्छु।
मेरा निर्देशनहरू सधैं स्पष्ट र व्यवस्थित छन्।
लक्ष्यहरू सामान्यतया राम्ररी वर्णन गरिएका कार्यहरूको एक श्रृंखला हुन् जुन समूहका सदस्यहरूद्वारा पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ
म सधैं सुन्दै छु
मलाई राम्रोसँग थाहा छ कि कसरी प्रत्येकको बलियो बिन्दुहरू पहिचान गर्ने र हाम्रो मिसनको सफलताको लागि तिनीहरूलाई अगाडि बढाउने।
अन्तमा, मेरो विभागमा, वातावरण धेरै राम्रो छ। त्यहाँ एक ठूलो समूह एकता र एक गतिशीलता छ जुन सबैको लागि लाभदायक छ
सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारीहरू सामना गर्छन्, आफ्नो काम कुशलतापूर्वक गर्छन्, र आवश्यक पर्दा स्वेच्छाले मद्दत गर्छन्।
म तपाईंलाई यी सबै तत्वहरूलाई ध्यानमा राख्न चाहन्छु जुन मलाई कम्पनीको सफलताको लागि आवश्यक देखिन्छ, र तपाईंले मेरा सबै कर्मचारीहरूलाई २०२२ को लागि तलब वृद्धि प्रदान गर्नुभयो। यो तिनीहरूको लागि वास्तविक पहिचान हुनेछ र सबै भन्दा माथि, यो सानो बढावाले तिनीहरूलाई नयाँ वर्ष सुरु गर्न ठूलो प्रोत्साहन दिनेछ।
यदि तपाइँ यसको बारेमा फेरि बोल्न चाहानुहुन्छ भने म तपाइँको सम्पूर्ण निपटानमा अवश्य छु।
कृपया स्वीकार गर्नुहोस्, श्रीमती एक्स, श्री वाई, मेरो धेरै ईमानदार अभिवादन।
तलब वृद्धि अनुरोध: बैंक बीमा क्षेत्र
विषय : मेरो पारिश्रमिक २०२२ मा
xxxxxx देखि, म बैंक द्वारा सल्लाहकारको रूपमा कार्यरत छु।
यदि म आफैलाई आज तपाईलाई लेख्न अनुमति दिन्छु भने यो मेरो हृदयको नजिक रहेको एउटा बिन्दुलाई सम्बोधन गर्न हो: वर्ष 2022 को लागि मेरो पारिश्रमिक।
नोभेम्बरको अन्त्यमा तपाईंले मलाई दिनुभएका सबै उद्देश्यहरू पूरा गरें, अर्थात्:
2020 मा xx बाट 2021 मा xx मा बढेको खाता खोल्ने संख्या
xx ग्राहकहरूका लागि बैंकले प्रस्ताव गरेको सेवाहरूको सदस्यता, अर्थात् कुल रकम: xxxx युरो।
जीवन बीमामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
बैंकले सिफारिस गरेका प्रत्येक वित्तीय उत्पादनहरू बारे जान्नका लागि मैले सबै तालिममा भाग लिएँ।
अन्तमा, म स्पष्ट रूपमा बीमाको लागि प्रगति गर्दैछु। गत वर्ष हाम्रो अन्तर्वार्ताको क्रममा तपाईंले मलाई औंल्याउनुभएको थियो, यो मेरो लागि कमजोर बिन्दु थियो। तपाईंले यो पनि स्वीकार गर्नुभयो कि म नयाँ प्रशिक्षण पछ्याउँछु, जसले मलाई ग्राहकहरूलाई मेरो प्रस्तुतीकरणहरू बनाउन धेरै मद्दत गर्यो।
यही कारणले गर्दा म २०२२ को लागि मेरो पारिश्रमिक छलफल गर्न तपाईसँग अन्तर्वार्ता लिन अनुरोध गर्न अनुमति दिन्छु।
यस बैठकमा, म तपाईंलाई टेलिफोन मार्फत हाम्रा सबै उत्पादनहरूको बिक्रीमा तालिमको लागि सोध्ने योजना पनि गर्छु। मलाई लाग्छ म त्यतिबेला धेरै कुशल हुनेछु।
निस्सन्देह, यदि तपाइँलाई कुनै थप जानकारी चाहिन्छ भने म तपाइँको सम्पूर्ण निपटान मा रहन्छु।
तलब वृद्धि अनुरोध: कार्यकारी सहायक
मेडम निर्देशक, श्रीमान निर्देशक,
XXXXXX देखि हाम्रो सानो संरचनाको कर्मचारी, म हाल कार्यकारी सहायकको पदमा छु।
तपाईंले ममाथि गर्नुभएको विश्वासको लागि पनि म धन्यवाद दिन्छु।
मेरो सीप, मेरो उत्तरदायित्व र मेरो लगानीलाई सधैं मान्यता दिइएको छ। 2021 मा, मैले धेरै परिवर्तनहरू गरें जसले केही सञ्चालन लागतहरू मात्र कम गरेन, तर कम्पनीको आन्तरिक जीवनमा पनि सुधार ल्यायो।
म तपाईंलाई केही महत्त्वपूर्ण उदाहरणहरू दिन सक्छु:
मैले सफाई कम्पनीसँग अभूतपूर्व सम्झौता वार्ता गरें। यसरी लाभको रकम xx% ले घटाइएको थियो। नयाँ वक्ताले ल्याए पनि कामको गुणस्तरमा सुधार आएको छ । परिसर धेरै रमाइलो छ!
मैले अफिसका सामानको मूल्यमा पनि काम गरेँ र त्यहाँ पनि राम्रो परिस्थिति जित्न सफल भएँ।
सँगै हामीले एउटा आन्तरिक जर्नल सिर्जना गर्यौं जसमा मैले केही लेख लेखें।
अन्तमा, म तपाईका सबै अनुरोधहरूको जवाफ दिन सधैं उपलब्ध छु र म तपाईको इच्छा अनुसार काम गर्न हतार गर्छु।
यही कारणले गर्दा म आफैलाई २०२२ को लागि तलब वृद्धि प्राप्त गर्न अनुरोध गर्न अनुमति दिन्छु, जुन मेरो लागि वास्तविक प्रोत्साहन हुनेछ।
त्यसकारण म आशा गर्छु कि हामी यस विषयको बारेमा भविष्यको भेटघाटमा सँगै कुरा गर्नेछौं जुन तपाईले मलाई प्रदान गर्न सहमत हुनुहुनेछ।
कृपया स्वीकार गर्नुहोस्, महोदया निर्देशक, श्रीमान निर्देशक, मेरो धेरै ईमानदार अभिवादन।
तलब वृद्धि अनुरोध: ट्राभल एजेन्ट
XXXXXX देखि कम्पनीको कर्मचारी, म हाल ट्राभल एजेन्टको पदमा छु।
मलाई राम्ररी थाहा छ कि हामी सबै हाल भोगिरहेका संकटले तपाईमा विशेष प्रभाव पारेको छ र तपाईले अनगिन्ती कठिनाइहरूको सामना गर्नु भएको छ। यद्यपि, आरक्षणहरू फेरि बढेका छन् (विशेष गरी फ्रान्सका विभिन्न क्षेत्रहरूका लागि) र कार भाडाका लागि अनुरोधहरू पनि बढिरहेका छन्।
यसैले म २०२२ मा मेरो पारिश्रमिक सँगै छलफल गर्न तपाईंसँग भेटघाटको लागि अनुरोध गर्न अनुमति दिन्छु।
म यो पनि औंल्याउन चाहन्छु कि मेरा दुई सहकर्मीहरूले कम्पनी छोडेका छन् र अब म तिनीहरूको फाइलहरूको जिम्मेवारीमा छु। म xxx क्लाइन्टहरूसँग पछ्याउँछु जबकि पहिले तिनीहरूको संख्या केवल xxx थियो। अन्तमा, मैले 2021 मा xxx रिजर्भेसनहरू गरें, जुन 2019 को तुलनामा % को वृद्धि प्रतिनिधित्व गर्दछ, एक वर्ष जब कोविड महामारी अझै भएको थिएन।
म वास्तवमै मेरो गम्भीरता र कम्पनीमा मेरो लगानीलाई हाइलाइट गर्न चाहन्छु। उठाउनु भनेको मेरो कामको लागि वास्तविक मान्यता हुनेछ।
यदि तपाईंलाई कुनै थप जानकारी चाहिन्छ भने, म तपाईंको सम्पूर्ण निपटानमा रहन्छु।
तलब वृद्धि अनुरोध: चार्टरर
XXXXXX देखि कम्पनीको कर्मचारी, म हाल चार्टरको पदमा छु।
यातायात को संगठन मा एक साँचो पेशेवर, मेरो काम अनिवार्य रूपमा निम्नानुसार वितरण गरिएको छ:
ढुवानी गर्न सामानहरू भएका ग्राहकहरूसँगको सम्बन्ध
यो सेवा प्रदान गर्ने क्यारियर खोज्नुहोस्
मूल्य सम्झौता गर्नुहोस्
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि ग्राहक आवश्यकताहरू चालकलाई राम्रोसँग सञ्चार गरिएको छ
जाँच गर्नुहोस् कि सामानहरू डेलिभर गरिएको छ
यो काममा, जुन फोनमा मात्र गरिन्छ, मेरो ग्राहकहरूसँग उत्कृष्ट सम्बन्ध छ। यो भन्नु पर्छ कि मैले वाहकहरूको वास्तविक सञ्जाल बनाएको छु जसले ममाथि भरोसा राख्छन् र म जस्तै सेवा मूल्यहरू छन्। त्यसैले म अत्यन्तै उत्तरदायी छु र मैले काम गर्ने सबै मानिसहरू पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छन्। म रसदको लागि तिनीहरूको साझेदार बनें र अब केवल एक आपूर्तिकर्ता होइन।
यी सबै बिन्दुहरू महामारीको समस्याहरूको बावजुद वर्ष २०२१ मा यसको xx% को कारोबारमा वृद्धि भएको हाम्रो कम्पनीको लागि मूल हो।
यही कारणले गर्दा हाम्रो अन्तिम भेटमा मलाई २०२२ को लागि मेरो तलब वृद्धिको लागि सोध्नु वैध जस्तो लाग्यो। म यो सबै लिखित रूपमा राख्ने स्वतन्त्रता लिन्छु, त्यसैले तपाईंले मेरो गम्भीरता र मेरो इच्छाको मूल्याङ्कन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। सधैं धेरै गर्नुहोस्, सधैं राम्रो गर्नुहोस्।
तपाईंको निर्णय विचाराधीन, म पक्कै पनि तपाईंको सम्पूर्ण निपटानमा छु।
तलब वृद्धि अनुरोध: स्वागत
हामीले XXXXXX मा मेरो वार्षिक मर्मत सम्भार गर्न सहमत भएका छौं। यो अन्तर्वार्ताको क्रममा, म हामीले वर्ष २०२२ को लागि मेरो क्षतिपूर्तिको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ कि मैले कम्पनी भित्र मेरो संलग्नता प्रमाणित गरेको छु, विशेष गरी यी केही उदाहरणहरूद्वारा:
कम्पनीको रिसेप्शन सधैं त्रुटिरहित रूपमा राखिएको छ ताकि जनताले सहज महसुस गरून्
मेल र पार्सलहरू सधैं समयमै पठाइन्छ।
प्याकेजको आगमनको बारेमा सहकर्मीलाई सूचित गर्न मैले स्काइप मार्फत सञ्चार प्रणाली सेटअप गरेको छु।
त्यसैले म आफूलाई 2022 को लागि तलब वृद्धि अनुरोध गर्न अनुमति दिन्छु, जुन मेरो लागि वास्तविक प्रोत्साहन र निश्चित मान्यता हुनेछ। म पक्कै पनि अन्य मिसनहरू र कम्पनीको कार्यप्रणाली सुधार गर्न सक्ने अन्य जिम्मेवारीहरू लिन पनि तयार छु जस्तै: कार फ्लीट (बीमा, निरीक्षण, इलेक्ट्रोनिक टोल बिलहरूको प्रमाणीकरण), भाडा व्यवस्थापन। अवश्य पनि, म तपाईलाई विभिन्न प्रस्ताव पेश गर्न सक्छु।
यसैले मलाई आशा छ कि हामी यस विषयमा सँगै भविष्यमा भेटघाटको क्रममा कुरा गर्नेछौं जुन तपाईले मलाई दिनुहुन्छ।
तलब वृद्धि अनुरोध: खरिदकर्ता
XXXXXX देखि, म कम्पनी XXXXXX भित्र खरिदकर्ताको कार्य अभ्यास गर्छु।
मेरो पदको ज्ञान र मेरो अनुभवले, म आज नयाँ जिम्मेवारी लिन तयार महसुस गर्छु।
सबैभन्दा पहिले मलाई यहाँ केही शब्दहरूमा संक्षेप गर्न अनुमति दिनुहोस्, मैले मेरो आगमनदेखि सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका विभिन्न मिसनहरू।
मैले नयाँ सेवा प्रदायकहरू सेट अप गरें जसले कम्पनीलाई हाम्रा भागहरूको लागत मूल्य घटाउन सक्षम बनायो।
मैले हाम्रा पुराना आपूर्तिकर्ताहरूबाट सबै योगदानहरूको समीक्षा गरें र हामीले तिनीहरूसँग हाम्रा विशिष्टताहरू परिमार्जन गर्यौं।
हामीले हाम्रा ग्राहकहरूको आवश्यकतालाई अझ छिटो प्रतिक्रिया दिन सक्षम हुन मर्मत समयसीमा पनि वार्ता गरें।
अन्तमा, मैले प्रत्येक वस्तुको उपभोग अध्ययन गरें र उत्पादन विभाग कहिल्यै स्टक बाहिर नहोस् भनेर स्वचालित पुनःपूर्तिहरू व्यवस्थित गरें।
तपाईलाई थाहा छ, मैले सधैं कम्पनीको हितको रक्षा गरेको छु र म त्यसो गरिरहनेछु, किनकि म मेरो कामलाई त्यस्तै देख्छु।
यस कारणले गर्दा म तपाईंसँग छलफल गर्नको लागि, तपाईंको सुविधामा मलाई भेट्न समय दिन अनुरोध गर्ने स्वतन्त्रता लिन्छु।
तलब वृद्धि अनुरोध: बिक्री सहायक
XXXXXX देखि कम्पनीको कर्मचारी, म हाल बिक्री सहायकको पदमा छु।
मेरो सीप, मेरो उत्तरदायित्व र मेरो लगानीलाई सधैं मान्यता दिइएको छ। 2021 मा, प्राप्त परिणामहरू र म जिम्मेवार थिए जुन मिसनहरूले कम्पनीलाई ग्राहकहरूको सेवामा उल्लेखनीय सुधार गर्न सक्षम बनायो। म आफैलाई, यस विषयमा, केही विशिष्ट उदाहरणहरू उद्धृत गर्न अनुमति दिन्छ:
कम्पनीले मेरो सहकार्यमा ग्राहकको अर्डरहरू प्रविष्ट गर्न र ट्र्याक गर्नको लागि नयाँ सफ्टवेयर स्थापना गरेको छ। त्यसैले म प्रति दिन थप मामिलाहरूसँग व्यवहार गर्छु: XXXXXX पहिले XXXXXX को सट्टा।
मैले पसलबाट मेरो सहकर्मीसँग साप्ताहिक बैठकहरू पनि सेट गरेको छु, जसले मलाई प्रत्येक फाइलको स्टक लिने अवसर दिन्छ। त्यसैले म हाम्रा विभागहरू बीचको राम्रो सञ्चारलाई नोट गर्छु, जसले मलाई हाम्रा ग्राहकहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा प्रतिक्रिया दिन अनुमति दिन्छ किनकि म तिनीहरूलाई तत्काल समाधान प्रदान गर्न सक्छु।
अन्तमा, मैले CPF मार्फत, साँझ घरमा, भिडियो मार्फत वर्षभर अंग्रेजी पाठ लिएँ। यो साँचो हो कि यो व्यक्तिगत प्रशिक्षण हो, तर यी सीपहरू सबै भन्दा माथि कम्पनीको फाइदाको लागि राखिएको छ किनकि म तिनीहरूलाई मेरो कर्तव्यहरूको प्रदर्शनमा हरेक दिन प्रयोग गर्छु।
यसैले म आफैलाई २०२२ को लागि तलब वृद्धि अनुरोध गर्न अनुमति दिन्छु, जुन मेरो लागि वास्तविक प्रोत्साहन हुनेछ।
तलब वृद्धि अनुरोध: आसीन व्यावसायिक
XXXXXX देखि कम्पनीको कर्मचारी, म हाल आसीन कमर्शियलको स्थितिमा छु
त्यस मितिदेखि, मैले ग्राहकका प्रश्नहरूको जवाफ दिन र उद्धरणहरू बनाउन आवश्यक सबै प्राविधिक ज्ञानहरू प्राप्त गरेकोले मैले आफ्नो सीपहरू सुधार गरेको छु। मैले धेरै प्रशिक्षण पाठ्यक्रमहरू पछ्याएको छु र म उत्पादन विभागलाई एक भाग कसरी काम गर्दछ र यसको निर्माण प्रक्रिया बुझ्नको लागि सोध्न संकोच गर्दिन।
अब देखि, म धेरै प्रतिक्रियाशील छु र मैले स्थापित गरेको अनुमानको संख्या बढ्दै गएको छैन। वास्तवमा, 2021 मा, मैले xx उद्धरणहरू गरें जबकि 2020 मा, संख्या xx थियो।
अन्तमा, तपाईलाई थाहा छ, म मेरो काममा पूर्ण रूपमा लगानी गरेको छु र म सधैं उपलब्ध छु। मैले काम गर्ने बिक्री व्यक्तिहरूले पुष्टि गर्नेछन् कि म निरन्तर तिनीहरूका ग्राहकहरूको सेवामा छु।
यसैले मलाई लाग्छ कि मैले सम्भावित र हाम्रा नियमित ग्राहकहरूसँग सम्बन्धको गुणस्तरमा धेरै सुधार गरेको छु।
योग्य नियुक्तिहरूको बुकिङ पनि विकसित भएको छ। यसले यो वर्ष xx% ले कारोबार बढाउन सक्षम गरेको छ।
म तपाईको सम्पूर्ण अधिकारमा रहन्छु।
तलब वृद्धि अनुरोध: लेखापाल १
xxxxxx को हाम्रो अन्तर्वार्तामा फलोअप गर्न, म आफैलाई मेरो 2022 को पारिश्रमिक सम्बन्धी उठाइएका बुँदाहरू लिखित रूपमा राख्न अनुमति दिन्छु।
सबैभन्दा पहिले, म तपाईलाई सम्झाउन चाहन्छु कि म कम्पनी YY भित्र xxxxxx देखि लेखापालको रूपमा काम गरिरहेको छु र मलाई मेरो काम साँच्चै मनपर्छ।
हामीले 2021 मा गरिएका मिसनहरूको सँगै समीक्षा गर्यौं र तपाईंले मेरो लगानी र सबै भन्दा माथिको सफलताको प्रशंसा गर्नुभएको कुरा पुष्टि गर्नुभयो।
यसरी, मैले प्रत्येक महिना एक वित्तीय ब्यालेन्स पाना स्थापना गरे जसले तपाईंलाई निर्णय गर्न र कम्पनीलाई सम्भव भएसम्म व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्यो।
मैले ग्राहक भुक्तानीहरूको विशेष रूपमा सावधानीपूर्वक अनुगमन सेट गरें र यसका लागि धन्यवाद, बकाया भुक्तानीहरू उल्लेखनीय रूपमा घटाइएको छ। 2020 मा, हामीसँग ……….. र ……….. दिनको ढिलाइ भएको थियो जबकि 2021 मा रकम………. र दिनहरूको संख्या अहिले……….. छ।
त्यसैले म आफूलाई वर्ष २०२२ को लागि तलब वृद्धिको लागि मेरो अनुरोध दोहोर्याउन अनुमति दिन्छु, जुन मेरो लागि वास्तविक प्रोत्साहन हुनेछ।
यदि तपाइँ यसको बारेमा फेरि कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने म तपाइँको निपटानमा स्पष्ट छु।
कम्पनी भित्र xxxxxx देखि, म लेखापालको कार्य अभ्यास गर्छु र म विशेष रूपमा सामाजिकको जिम्मेवारीमा छु।
यी पछिल्ला २ वर्ष २०२० र २०२१ मेरो लागि विशेष गरी तीव्र थिए। अभूतपूर्व महामारी र हामीले व्यवस्थापन गर्नु पर्ने जटिल परिस्थितिले मलाई विभिन्न मुद्दाहरूमा अनुकूलन गर्न बाध्य तुल्यायो। तालिम बिना, पेस्लिपमा नयाँ खण्डहरू सिर्जना गर्न आवश्यक थियो। मैले आंशिक बेरोजगारीको प्रतिपूर्ति र प्रशासनसँग सबै सम्बन्धहरूको पनि ख्याल राखें। लेखापरीक्षणका क्रममा लेखापालले पनि कुनै त्रुटि नभएको बताए ।
यो अनुभव मेरो लागि धेरै समृद्ध भएको छ र मैले ठूलो मात्रामा चुनौती लिएको जस्तो देखिन्छ। सेवा सामान्य रूपमा सञ्चालन होस् र मेरा सहकर्मीहरूले यस महामारीबाट हुने क्षतिका साथै थप समस्याहरू भोग्नु नपरोस् भनेर मैले धेरै लगानी गरेको छु।
त्यसैले मेरो तलबमा वृद्धि प्राप्त गर्न सक्षम हुनु मेरो लागि धेरै इनामदायी हुनेछ।
यदि तपाइँ अपोइन्टमेन्टको समयमा यसको बारेमा कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने म तपाइँको निपटानमा स्पष्ट छु।
तलब वृद्धि अनुरोध: विकासकर्ता
XXXXXX देखि कम्पनीको कर्मचारी, म हाल विकासकर्ताको पदमा छु।
त्यो मितिदेखि, मैले कम्पनीका विभिन्न अनुप्रयोगहरूको स्तरवृद्धि गर्न जारी राखेको छु।
तपाईलाई थाहा छ, मैले धेरै परियोजनाहरूको नेतृत्व गरे जुन बिक्रीमा परिणाम भयो।
म हाम्रो नयाँ वेबसाइटको प्रयोगको लागि ग्राहक समर्थन पनि हुँ र सबै कुरा राम्ररी चलिरहेको छ।
अन्तमा, म हाल एउटा एप्लिकेसन विकास गर्दैछु जसले हाम्रो काम गर्ने तरिकामा क्रान्ति ल्याउनेछ र सबै भन्दा माथि कम्पनीका सबै कर्मचारीहरूको लागि बहुमूल्य समय बचत गर्नेछ।
म धेरै रचनात्मक हुँ, म सधैं भरपर्दो र सहज कम्प्युटर प्रणाली प्राप्त गर्न सबैभन्दा सान्दर्भिक समाधानहरू प्रयोग गर्छु। म मेरो काममा पूर्ण रूपमा लगानी गरेको छु र म निरन्तर उपलब्ध छु।
त्यसैले सबैको कामको गुणस्तरमा निकै सुधार गरेको जस्तो लाग्छ । म वास्तवमा सँधै नयाँ प्रविधिहरू कसरी विकसित हुन्छ भनेर अनुसन्धान गर्छु, म यो पनि जाँच गर्छु कि हाम्रा प्रतिस्पर्धी वेबसाइटहरू कसरी स्थित छन्।
तलब वृद्धि अनुरोध: pजताततै १
तपाईको कम्पनीको xx बर्षको लागि कर्मचारी, म हालको पदमा छु।
केही महिनादेखि तपाईंले मलाई धेरैभन्दा धेरै कामहरू पूरा गर्न र थप जिम्मेवारीहरू दिनुहुन्छ भन्ने मैले देखेको छु। म कम्पनीको विकासमा भाग लिन पाउँदा खुसी र खुसी छु।
तपाईंले पक्कै याद गर्नु भएको छ, म मेरो घण्टा गणना गर्दिन, म गम्भीर छु, म सधैं मेरो काम समयमै गर्छु र मेरो सीपहरू यसरी विकसित भएको छ।
यसैले म २०२२ को तलब वृद्धिबाट लाभ लिन चाहन्छु। त्यसपछि मेरो पारिश्रमिक मेरो कर्तव्य अनुरूप हुनेछ।
कम्पनी र मैले राखेको स्थितिले मेरो अपेक्षाहरू पूरा गर्दछ। म पूरा भएको महसुस गर्छु र म मेरा सहकर्मीहरूको मूल्यको कदर गर्छु। हामी सधैं एकअर्कालाई समर्थन गर्छौं र एउटै लक्ष्य छ: हाम्रा ग्राहकहरूको सन्तुष्टि।
यसैले म मेरो अनुरोधलाई सँगै छलफल गर्न भेटघाट गर्न चाहन्छु।
म यो अन्तर्वार्ताको मिति र समयको रूपमा तपाइँको सम्पूर्ण निपटानमा अवश्य छु।
XXXXXX देखि कम्पनीको कर्मचारी, म हाल xxxxxx को पदमा छु र हामीले xxxxxx मा एक अन्तर्वार्ता लियौं।
यस अन्तर्वार्ताको क्रममा, तपाईंले सुधारको लागि धेरै अंकहरू व्यक्त गर्नुभयो:
मेरा सन्देशहरूमा धेरै हिज्जे गल्तीहरू
त्यसैले मैले यी2बिन्दुहरूलाई विचार गरें जुन मलाई महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। मैले आफ्नो सीप सुधार गर्न सक्षम भएँ। वास्तवमा, CPF को सहयोगमा, मैले फ्रान्सेली र विशेष गरी हिज्जे र व्याकरणमा तालिम लिएँ। सबै XX घण्टा पाठहरूमा। सिक्ने यी घण्टाहरूले मलाई मेरो सन्देशहरूको लेखनमा उल्लेखनीय सुधार गर्न अनुमति दिए। तपाईंले मलाई यो कुरा औंल्याउनुभयो, जुन मैले धेरै सराहना गरें।
मेरो उत्तरदायित्वको सम्बन्धमा, मैले दिनको समयमा गर्नुपर्ने सबै कार्यहरू दर्ता गर्न र वर्गीकरण गर्न तपाईंले सुझाव दिनुभएको रूपमा, मैले प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छु। यसैले, म कुनै पनि बिर्सने छैन र म निश्चित गर्दछु कि ती सबै र समयमै पूरा हुन्छन्। व्यक्तिगत रूपमा, म यो नयाँ विधिको साथ कामको एक निश्चित आराम पाउँछु र सबै भन्दा माथि, म अधिक निर्मल छु।
मलाई आशा छ तपाईंले यो परिवर्तन प्रयास र सुधार गर्न मेरो ड्राइभको कदर गर्नुहुन्छ।
तलब वृद्धि अनुरोध: वकिल
कानून विशेषज्ञ, म कम्पनीका सबै कानूनी समस्याहरूको लागि तपाइँको वार्ताकार र विशेषाधिकार प्राप्त सल्लाहकार हुँ।
थप विशेष रूपमा, म औद्योगिक सम्पत्ति, साथै सबै प्याटेन्ट आवेदनहरू र तिनीहरूको सुरक्षा सम्बन्धी तपाईंको रुचिहरूको रक्षा गर्ने ख्याल राख्छु।
म प्रतिस्पर्धी खुफिया कार्य गर्दछु र म तपाइँको पेटेंट को प्रतिहरु को शंका को घटना मा हस्तक्षेप गर्न संकोच गर्दिन। म हरेक दिन कम्पनीको हित रक्षा गर्छु।
यस वर्ष, मैले विशेष गरी YY फाइललाई पछ्याएँ जसले हामीलाई ठूलो चिन्ताको कारण बनायो, यसले वकीलहरूको सहयोगमा सेटअप गर्न धेरै लामो समय लियो, यो बरु जटिल थियो। तर, मैले धेरै काम गरें, मैले हाम्रा विरोधीहरूको सबै गल्तीहरू खोजे र फेला पारे। र हामी विजयी बाहिर आयौं!
म सबै सम्झौताहरू, सम्भावित जोखिमहरू पनि विश्लेषण गर्छु, म कानूनको विकासको लागि हेर्छु। म कम्पनीका सबै विभागहरूमा सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिन र सबै कुरा ठीक छ कि छैन भनेर जाँच गर्न उपलब्ध छु।
अब तपाईलाई मेरो गम्भीरता, मेरो उपलब्धता र मेरो कामको गुणस्तर थाहा छ।
यही कारणले गर्दा म आफूलाई सन् २०२२ को लागि मेरो तलब वृद्धिको लागि सोध्न अनुमति दिन्छु।
जब तपाईं चाहानुहुन्छ म यसको बारेमा कुरा गर्न तपाईंको सम्पूर्ण अधिकारमा छु।
तलब वृद्धि अनुरोध: स्टोरकीपर
विषय: मेरो पारिश्रमिक २०२२ मा
XXXXXX देखि कम्पनीको कर्मचारी, म हाल स्टोरकीपर, गोदाम प्रबन्धकको पदमा छु।
संगठन र अर्डरको तयारीमा एक सच्चा पेशेवर, तपाईंले मलाई 2021 मा, धेरै जिम्मेवारीहरू दिनुभयो।
हामीले नयाँ ह्यान्डलर राखेका छौं। त्यसकारण मैले उहाँको आदेशहरू तयार गर्न समय-समयमा उहाँको काम जाँच्न र आवश्यक पर्दा उहाँलाई मद्दत गर्नुपर्दछ।
म लिफ्टिङ उपकरण फ्लीट को मर्मत व्यवस्थापन गर्छु
म ERP मा ग्राहक आदेशहरू प्रविष्ट गर्छु
म पनि आपूर्तिकर्ता आदेशहरू प्रविष्ट गर्छु
तपाईंले ममाथि राख्नुभएको विश्वासबाट म पनि पूर्ण रूपमा खुसी छु र म मेरो नयाँ जिम्मेवारीलाई पूर्ण रूपमा ग्रहण गरिरहेको छु। म आफ्नो काममा पूरा भएको छु भन्न पनि सक्छु ।
तपाईंले उल्लेख गरिसक्नुभएको छ, हामीले यस वर्ष ग्राहक अर्डरहरूमा शून्य त्रुटिहरू गरेका छौं। थप रूपमा, मैले क्यारियरहरूसँग साझेदारी स्थापना गरेको छु र त्यहाँ पनि, २०२१ मा ३ वटा डेलिभरी ढिलाइ बाहेक हामीलाई कुनै समस्या भएको छैन।
सामानको ढुवानीका लागि म प्रायः ग्राहकहरूसँग सम्पर्कमा छु र सबै कुरा राम्ररी चलिरहेको छ।
तलब वृद्धि अनुरोध: मार्केटिंग
हामीले भर्खरै xxxxxx मा मेरो वार्षिक अन्तर्वार्ता गरेका थियौं जसमा हामीले मेरो 2022 क्षतिपूर्ति र सम्भावित वृद्धिको बारेमा छलफल गर्यौं।
म तपाईंलाई सफल कार्यहरूको विशिष्ट उदाहरणहरू दिएर मेरो अनुरोधलाई सुदृढ गर्न चाहन्छु:
कम्पनी अहिले सामाजिक सञ्जालमा धेरै उपस्थित छ। हरेक दिन, म सम्भवतः सबै भन्दा आकर्षक पाठ संग एक फोटो पोस्ट गर्छु। यसका लागि, म बिक्री प्रतिनिधिहरूसँग सम्पर्कमा छु जसबाट मैले ग्राहकहरू र हामीले प्राप्त गरेका अर्डरहरू साथै हामीले सहभागी भएका साइटहरूको जानकारी सङ्कलन गर्छु।
हामी अब हाम्रा ग्राहकहरूलाई प्रत्येक 15 दिनमा एउटा न्यूजलेटर पठाउँछौं। म यसलाई पूर्ण रूपमा लेख्छु र म वितरणको ख्याल राख्छु।
अन्तमा, तपाईंले कम्पनीमा मेरो संलग्नता नोट गर्नुभयो। म नयाँ र मौलिक विचारहरूको स्रोत हुँ। म आलोचनाहरूलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्दछु जुन मैले काउन्टर-प्रस्तावहरूको साथ व्यवस्थित रूपमा अनुसरण गर्दछु। म सधैं समाधानको खोजीमा छु।
तसर्थ, म तपाईलाई एक पटक फेरि वर्ष २०२२ को तलब वृद्धिको लागि सोध्न अनुमति दिन्छु। यो मेरो कामको मूल्यको वास्तविक मान्यता हुनेछ।
तलब वृद्धि अनुरोध: चिकित्सा सचिव
XXXXXX देखि तपाईको फर्मको कर्मचारी, म २०२२ मा मेरो पारिश्रमिक सँगै छलफल गर्नको लागि तपाईसँग भेटघाटको लागि सोध्न अनुमति दिन्छु।
सबैभन्दा पहिले, म तपाईलाई ममाथि राख्नुभएको विश्वासको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु।
मेरो सीप, मेरो उत्तरदायित्व र मेरो लगानीलाई सधैं मान्यता दिइएको छ। यस वर्ष, मैले धेरै पहलहरू लिएको छु जसको फलस्वरूप फर्मको कार्यप्रणालीमा उल्लेखनीय सुधार भएकोमा म विश्वस्त छु।
परिसर पूर्ण रूपमा मर्मत गरिन्छ र नियमित रूपमा कीटाणुरहित हुन्छ। दिनमा २ देखि ३ पटक आउने सरसफाइ गर्ने महिलालाई तपाईंले सोध्नुभएको ठाउँमा राखेको छु। यसरी यो बिरामीहरूको लागि सुरक्षा हो, तर हाम्रो लागि पनि।
अपोइन्टमेन्टहरू तपाइँको इच्छा र तपाइँको तालिका अनुसार बनाइन्छ। हामी राम्रो टोली भावनामा काम गर्छौं र हामीसँग समान मानहरू छन्: तपाईका बिरामीहरूलाई गुणस्तरीय हेरचाह प्रदान गर्न।
परामर्शका मिनेटहरू प्रत्येक भ्रमण पछि तुरुन्तै टाइप गरिन्छ र आवश्यक भएमा तपाईका सहकर्मीहरूलाई पठाइन्छ। मलाई कुनै ढिलाइ छैन।
अन्तमा, म सधैं उपलब्ध रहन्छु र यदि तपाईका बिरामीहरूलाई मलाई आवश्यक छ भने मेरो घण्टा गणना नगर्नुहोस्।
यस कारणले गर्दा म चाहन्छु कि हामी हामी सँगै यस विषयको बारेमा कुरा गर्नको लागि भविष्यको भेटघाटमा कुरा गरौं जुन तपाईले मलाई दिनुहुन्छ।
तलब वृद्धि अनुरोध: प्राविधिक
हामीले भर्खरै मेरो व्यक्तिगत अन्तर्वार्ताको लागि भेट्यौं, xxxxxx। यस छलफलको क्रममा, मैले २०२२ को लागि मेरो पारिश्रमिक बढाउन अनुरोध गरें। मैले गरेका सबै कार्यहरू देखाउनको लागि हामीले उल्लेख गरेका सबै बुँदाहरू लिखित रूपमा राख्न चाहन्छु:
प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नका लागि म प्रायः ग्राहकहरूलाई बिक्रीकर्ताहरूलाई साथ दिन्छु
म नयाँ पार्ट्सहरू लन्च गर्नु अघि र सबै कुरा अर्डर अनुसार छ कि छैन भनेर जाँच गर्न मद्दत गर्दछु
प्राविधिक प्रश्नहरू सोध्ने ग्राहकहरूलाई म फोन र इमेलद्वारा जवाफ दिन्छु
म हरेक उद्धरण जाँच गर्छु
म प्रमाणीकरणका लागि योजनाहरू बनाउँछु
त्यसैले मलाई लाग्छ कि यी सबै सीपहरू कम्पनीको लागि वास्तविक थपिएको मूल्य हो।
म विशेष गरी स्वतन्त्र छु। मेरा जवाफहरू सधैं भरपर्दो र छिटो हुन्छन्।
यदि तपाइँ मेरो पारिश्रमिकको बारेमा फेरि छलफल गर्न चाहनुहुन्छ भने म तपाइँको सम्पूर्ण निपटानमा अवश्य छु।
तपाईको बुझाइको लागि र मेरो वार्षिक अन्तर्वार्ताको क्रममा मैले तपाईबाट पाएको प्रोत्साहनको लागि अग्रिम धन्यवाद।
तलब वृद्धि अनुरोध गर्नुहोस्: टेलिप्रोस्पेक्टर
XXXXXX देखि कम्पनीको कर्मचारी, म हाल टेलिमार्केटरको पदमा छु।
त्यो मितिदेखि, मैले एक ठोस अनुभव प्राप्त गरेको छु जसले मलाई सेट गरिएका सबै उद्देश्यहरू पार गर्न अनुमति दिन्छ।
वास्तवमा, संख्या अनुसार, म सबै भन्दा राम्रो telemarketers मध्ये एक हुँ:
म प्रति दिन xxx कलहरू गर्न प्रबन्ध गर्छु
मैले xx मितिहरू पाउँछु
म धेरै आदेशहरू फाइनल गर्न प्रबन्ध गर्छु
मेरा रिपोर्टहरू, विक्रेताहरूका लागि, धेरै स्पष्ट छन् र तिनीहरूको भ्रमणको लागि आवश्यक सबै जानकारी समावेश गर्दछ।
2020 को तुलनामा, म धेरै कुशल छु, किनकि मलाई मेरा उत्पादनहरू धेरै राम्रोसँग थाहा छ र म सम्भावनाहरूसँग बढी सहज महसुस गर्छु। म अब तिनीहरूको प्रतिक्रियाहरू मास्टर गर्छु, म यसरी तिनीहरूको प्रतिक्रियाहरू अनुमान गर्छु र मैले पहिलो फिल्टरहरू पास गर्न एउटा तर्क तयार गरेको छु।
यो अत्यन्तै कठिन कार्य हो, किनभने हाम्रा वार्ताकारहरूसँग हामीसँग कुरा गर्ने समय छैन र मैले निरन्तर रूपमा सानो वाक्यांश, सानो शब्द वा स्वर खोज्नु पर्छ जसले त्यसपछि भेटघाटमा लैजान्छ।
यसैले म आफूलाई सन् २०२२ को लागि मेरो पारिश्रमिकको बारेमा छलफल गर्न तपाईसँग अन्तर्वार्ताको लागि अनुरोध गर्न अनुमति दिन्छु। मलाई सधैं प्रभावकारी हुन जारी राख्न र कम्पनीको कारोबार बढाउनको लागि तपाईबाट प्रोत्साहन र प्रोत्साहन चाहिन्छ।
इमेल मार्फत तलब वृद्धिको लागि अनुरोध फेब्रुअरी th, २०२१Tranquillus
अघिल्लोस्वास्थ्य सङ्कटका कारण विदा नलिँदा दिइएको भत्ता थपिएको छ
निम्नगतिशीलता बिदामा रहेका कर्मचारीहरूले सामूहिक संक्रमण योजनाबाट लाभ उठाउन सक्छन्